Hesekiel 46 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
46 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mfinimfini hɔ adiwo no ponkɛse a ani kyerɛ apuei+ no, wɔnto mu+ nnansia a wɔde yɛ adwuma+ no nyinaa, nanso sɛ edu homeda anaa ɔsram foforo a, wommue.+ 2 Obirɛmpɔn no mfi abɔnten mfa ɔponkɛse+ no abrannaa kwan so mmegyina apongua no ano;+ afei asɔfo no mmɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre mma no, na ɔmmɔ ne mu ase wɔ ɔpon no ano+ na omfi adi, nanso wɔrento ɔpon no mu kosi anwummere. 3 Sɛ edu homeda ne ɔsram foforo a, asase no sofo mmɔ wɔn mu ase wɔ ɔpon no ano wɔ Yehowa anim.+ 4 “‘Sɛ edu homeda a, obirɛmpɔn no mfa nguammaa anini asia a dɛm nni wɔn ho ne odwennini a dɛm nni ne ho mmɛbɔ ɔhyew afɔre mma Yehowa.+ 5 Na aduan afɔre nso, ɔmfa efa nka odwennini no ho,+ na nguammaa no de, ɔmfa aduan a ne nsa bɛso so nka ho,+ na ngo no nso, ɔmfa hin biako nka efa ho.+ 6 Na ɔsram foforo+ no, ɔmfa nantwinini kumaa a dɛm nni ne ho ne nguammaa anini asia ne odwennini a dɛm nni wɔn ho mmra.+ 7 Ɔmfa efa biako nka nantwinini kumaa no ho na ɔmfa efa biako nso nka odwennini no ho mmɔ aduan afɔre, na nguammaa no de, ɔmfa nea ne nsa bɛso so nka ho; na ngo no nso, ɔmfa hin biako nka efa ho.+ 8 “‘Sɛ obirɛmpɔn+ no reba mu a, ɔmfa ɔpon no ntwironoo mu mmra, na sɛ ɔrefi adi nso a, ɔmfa hɔ ara nkɔ.+ 9 Na sɛ ɔman no reba Yehowa anim wɔ afahyɛ+ mmere no mu abɛbɔ wɔn mu ase a, nea ɔbɛfa atifi fam pon+ no mu aba no mfa anafo fam pon+ no mu mfi adi; na nea ɔbɛfa anafo fam pon no mu aba no mfa atifi fam pon no mu mfi adi. Obiara mmfa ɔpon a ɔfaa mu bae no mu mmfi adi; ɔnkɔ n’anim tẽẽ na omfi adi. 10 Sɛ wɔreba mu a, obirɛmpɔn no nka wɔn ho mmra, na sɛ wɔrefi adi a, ɔnka wɔn ho nkɔ.+ 11 Na edu afahyɛ+ bere anaa nnapɔnna a, eyi na wɔmfa mmɔ aduan afɔre: Ɔmfa efa biako nka nantwinini kumaa ho, na ɔmfa efa biako nso nka odwennini ho, na nguammaa no de, ɔmfa nea ne nsa bɛso so nka ho, na ngo no nso, ɔmfa hin biako nka efa ho.+ 12 “‘Na sɛ obirɛmpɔn no fi ne pɛ mu de n’ayɛyɛde ba bɛbɔ ɔhyew afɔre+ anaa asomdwoe afɔre ma Yehowa a, wommue ɔpon a ɛkyerɛ apuei+ fam no mma no, na ɔmfa ne hyew afɔre ne asomdwoe afɔre no mmra sɛnea ɔyɛ homeda+ no. Na sɛ ofi adi a, wɔnto ɔpon no mu.+ 13 “‘Fa oguammaa a wadi afe a dɛm nni ne ho bra na wɔmfa mmɔ ɔhyew afɔre mma Yehowa daa.+ Fa bra anɔpa biara. 14 Na fa eyinom ka ho na wɔmfa mmɔ aduan afɔre anɔpa biara: Efa nkyem asia mu biako ne ngo hin nkyem abiɛsa mu biako a wɔde bɛfɔtɔw esiam muhumuhu no.+ Wɔbɛbɔ aduan afɔre ama Yehowa daa, na eyi yɛ ahyɛde a ɛbɛtena hɔ daa. 15 Wɔmfa oguammaa no ne aduan afɔrebɔde ne ngo no mmra anɔpa biara sɛ ɔhyew afɔre daa.’ 16 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Sɛ obirɛmpɔn no de agyapade bi kyɛ ne mma no mu biara a, ɛyɛ ne mma no agyapade. Ɛbɛyɛ wɔn kyɛfa daa. 17 Na sɛ ɔde n’agyapade no bi ma n’akoa a, ɛbɛyɛ ne dea akosi ahofadi afe+ no, na ɛbɛsan abedi obirɛmpɔn no nsam. Ne mma no nkutoo na n’agyapade betumi abedi wɔn nsam daa. 18 Ɛnsɛ sɛ obirɛmpɔn no gye ɔmanfo no mu biara agyapade de pam no fi ne kyɛfa ho.+ Ɔmfa n’ankasa agyapade mma ne mma, na me man anhwete amfi wɔn agyapade ho.’”+ 19 Na ɔde me faa ɔkwan+ a ɛwɔ ɔpon no nkyɛnmu no so baa asɔfo adidibea kronkron a ani kyerɛ atifi fam no ho,+ na mihuu beae bi wɔ atɔe fam, akyi hɔ. 20 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Ɛha na asɔfo no bɛnoa asodi afɔrebɔde+ ne bɔne ho afɔrebɔde+ no, na ɛha ara na wɔbɛtõ aduan afɔrebɔde+ no, na wɔamfa biribiara ankɔ akyi hɔ adiwo hɔ ankɔtew nnipa no ho.”+ 21 Na ɔde me fii adi baa akyi hɔ adiwo hɔ, na ɔde me baa adiwo no ntwea adum anan no ho. Na mihuu adiwo wɔ ntwea adum no biara ho wɔ ha ne ha. 22 Ná adiwo nketewa bi wowɔ adiwo no ntwea adum anan no ho; ne ntwemu yɛ basafa aduanan na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduasa. Na ntwea anan no nyinaa nsusuwii yɛ pɛ. 23 Ná wɔato bamma atwa ntwea anan no nyinaa ho ahyia, na wɔayɛ muka a wɔnoa+ so ade wɔ bamma no ase. 24 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Wɔn a wɔnoa ade no adan ni; ɛha na Fie no mu asomfo noa ɔman no afɔrebɔde.”+